Ahoana ny fomba hialana amin'ny famonoana: toro-hevitra 12 voaporofo hanampiana anao handroso! - Fifandraisana
Noho izany, manana fitiavana ianao. Nahita fahatsapana ianao. Somary ianao, na be dia be, diso tafahoatra.
Saingy, indrisy, tsy hitranga fotsiny izany.
Mety misy ny antony isan-karazany ahalalanao fa tsy hivoatra ny zavatra misy eo aminareo roa, na ny antony ahalalanao fa tsy hahomby na tsy hahomby izany.
Saingy satria ny atidohanao mahalala amin'ny ambaratonga mitombina fa mila mijanona tsy manorotoro ianao dia tsy midika izany fa hihaino ny fonao.
lazao amiko zavatra mahaliana momba ny fanontanianao
Na farafaharatsiny mba tsy mahitsy.
Ny fahazoana mamaky fo dia mety ho mora rehefa tsy mahita azy ireo indray mandeha amin'ny volana manga ianao. Tsy hitan'ny maso intsony, tsy misy ao an-tsaina ny tena marina, amin'ireny tranga ireny.
Fa rehefa mpiara-miasa aminao na mpiara-mianatra aminao izy ireo ary mahita azy ireo tsy tapaka, angamba imbetsaka isan'andro aza, dia ampahatsiahivina tsy tapaka ny fisian'izy ireo ianao ary sarotra kokoa ny mitazona ny sainao hiala aminy.
Raha nanjary mpinamana namanao ianao ary halanao ny tsy hanana izany fisakaizana izany, na koa olona efa manana fifandraisana maharitra, dia mety ho mafy tokoa izany.
Raha nahavita nilatsaka tamin'ny fofombadin'ny iray tam-po taminao ianao, na zavatra rom-com mitovy, dia nahazo ny loka ianao noho ilay fikomiana tsy mendrika indrindra, ary mety ho iray amin'ireo sarotra indrindra nesorina. Satria tsy Hollywood io, ary ny fihoarana izany no azonao atao.
Saingy, tsy azo atao izany satria mety ho toa ny toe-javatra ianao rehefa eo am-pelatanan'ny totohondry, misy hazavana any amin'ny faran'ny tionelina.
Afaka miala amin'ny sakaizanao ianao, ary ianao dia hanao.
Ny hany ilainao dia paikady andrana sy voasedra vitsivitsy hanampiana anao hahazo tsara ny fahatsapanao ary handroso.
1. Ekeo ny toe-javatra
Fantatrao tanteraka fa tsy misy na inona na inona mety hitranga eo aminao, fa angamba mbola mifikitra amin'ny kofehin'ny fanantenana ianao.
Azonao atao ny manonofinofy momba azy ireo tonga saina tampoka, na momba ny toe-javatra niova tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny fomba nahatongavanareo roa nanao izany.
Mety tsy nanaiky an'iza tamin'iza ianao, ary indrindra indrindra tamin'ny tenanao, fa mbola mitazona fanantenana fa hitranga… indray andro any.
Ny dingana voalohany hialana amin'ny fahatapahana dia ny fanekena.
Mila miaiky amin'ny tenanao ianao fa nanantena ianao, ary apetraho mafy ao aorianao ireo fanantenana ireo.
Raha vantany vao nanaiky ny helo tamin'ny toe-javatra ianao vao afaka niatrika izany.
2. Miresaka momba izany
Na inona na inona ataonao dia aza sotronina ny fahatsapanao ary antenao fa hanjavona majika fotsiny izy ireo.
Zava-dehibe ny manatona ireo namanao na fianakavianao ary miresaka momba izay tsapanao.
Mety tsy dia misy dikany ny fanorotoroana iray, indrindra raha ny namanao dia mandalo fisarahana amin'ny fifandraisana maharitra, saingy tsy mahatonga ny fahatsapanao ho tsy misy dikany izany.
Mbola tena zava-dehibe izy ireo.
Ny fametrahana ny zava-mitranga ao an-tsainao ho teny dia afaka manampy anao amin'ny fikirakirana azy, mahazo fomba fijery kely momba azy io ary miasa amin'izany.
Raha, na inona na inona antony, tsy zavatra azonao resahina amin'ny namanao na ny fianakavianao izany, dia mety hisy mpitsabo na mpanolotsaina ho valiny.
Tadidio koa fa tsy mila mandany ny fotoananao rehetra amin'ny namanao ianao manasaraka ny sakaizanao.
Esory hiala amin'ny tratranao izany, fa tohizo ny resaka.
Miresaka zavatra hafa. Miresaka momba azy ireo. Ifanakalozy hevitra ny andian-tantara tianao, ny drafinao…
Apetraho amin'ny zon'izao tontolo izao, dia hahatsapa ho tsara kokoa ianao avy eo.
3. Alao an-tsaina hoe nanao ahoana marina izany
Miorina amin'ny nofinofy ny ankamaroan'ny crushes, sary an-tsaina izay mety hitranga eo anelanelanareo roa eo amin'ny tontolon'izao tontolo izao…
… Iray izay tsy naha-sakaizanao ny namanao akaiky indrindra, na ny lehibenao, na tsy manana olan'ny fanoloran-tena lehibe , na izay olana mety hitranga.
Miaina ny nofinofy ao an-dohanao ianao, saingy mifikitra amin'ny ampahany tsara.
Noho izany, tonga izao ny fotoana an-tsaina ny lesoka rehetra. Eritrereto ny fofon'izy ireo ratsy amin'ny maraina, na ny fikorontanan-dry zareo, na ny tsy zakan'ny rafozambavinao.
Izany dia tokony hanampy anao hiverina amin'ny tany ary hanome anao fomba fijery mangatsiaka sy mafy.
Raha vantany vao nanaiky zavatra ianao dia mila manome fotoana anao hisaona ny fifandraisana.
Azo antoka, mety ho tao an-dohanao fotsiny izany, fa tsy midika izany fa tsy tena nisy ny fahatsapana ary tsy ho sarotra ny hihoatra izany.
Noho izany, tsy tokony handroso fotsiny ary hiezaka ny hanadino izany rehetra izany, manomeza fotoana hisaonana sy halahelo.
Mialà sasatra amin'ny alina. Mijere sarimihetsika mampalahelo. Mitomany raha mila izany. Apetaho avy eo ny feonao tianao, mandihiza, ary manaova tsipika eo ambaniny.
Mety tsy naniry intsony ny hihaona amin'ny olon-kafa ianao hatramin'ny nanapotipotehanao azy, fa ny tsy mampiaraka sy manakatona ny tenanao amin'ny zavatra hafa azo atao dia vao mainka miharatsy ny toe-draharaha.
Ny lesoka dia rehefa sahirana ianao manonofinofy momba ny volan-tantely nofinofisinao amin'ilay olona tsy nety, dia namela fotoana maromaro hanenjehana ilay olona mety ianao ary tsy tsapanao akory.
Betsaka ny mety tsy hahatsapanao hoe mametraka ny tenanao any ivelany ianao, misokafà amin'ny hevitra mampiaraka ary alao antoka fa omenao vintana ny olona mifanena aminao.
Na inona na inona ataonao dia ataovy izay tsy hahitanao ny sainao mampitaha azy ireo amin'ny olon-tianao.
Tsy ny rehetra no mahazo aina amin'ny hevitra momba ny fampiarahana amin'ny Internet, fa fomba mahafinaritra io hihaonana amin'ny olona mitovy hevitra aminao izay tsy hitanao am-pitoerana amin'ny fiainana tena izy.
Ary, fomba mamirapiratra hitazomana ny sainao izany, midika hoe kely kokoa ny fotoana hipetrahanao amin'ny olon-tianao.
Mazava ho azy, tsy misy zavatra ilaina fahalianana amam-pitiavana amin'ny fiainany, ary mihoatra ny fahafaha-mizaka tsimoramora ianao nefa tsy miray amin'olon-kafa, fa ny mampiaraka kosa dia mety hanelingelina anao, ary hanome anao fahatokisan-tena ilainao.
Rehefa dinihina tokoa, ny fahatokisanao dia mety ho nandondona kely vokatr'izany ny fahatsapanao tsy voavaly , ka ampahatsiahivina ny tenanao fa manintona ny hafa ianao mety ho izay ilainao fotsiny mba hampisondrotana ny fahatokisanao tena, ary tadidio fa mendrika ny tsara indrindra ianao.
Iza no mahalala, mety mihaona amin'ny olona miavaka ianao.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny faritra misy ny sakaiza ary ho tonga bebe kokoa noho ny namana fotsiny
Ireo karazam-pitiavana 7 azon'ny olona atao amin'ny fiainany
6. Fero ny fotoana laninao manodidina azy ireo
Ao amin'ny tontolon'ny idealy dia hajanonao ny fifandraisana rehetra amin'ny olon-dratsy…
Fa raha tsy azo ihodivirana ny fisian'izy ireo amin'ny fiainanao na te hihazona finamanana amin'izy ireo ianao dia tokony mbola hiezaka ny hametra ny fotoana laninao manodidina azy ireo mandra-piverinao amin'ny fientanam-po.
Hisy fotoana ianao voatery hiaraka amin'izy ireo, fa manaova soa ho anao ary tazomy izany.
Raiso ny fifehezana isaky ny afaka manao izany ianao.
Aza manao an'izany fanasana izany. Sorohy ny toerana fantatrao fa mandany fotoana. Aza miala amin'ny lalanao mahita azy ireo na mandany fotoana miaraka amin'izy ireo.
Ny crushes dia mety hitranga ao an-dohanao tanteraka, fa raha efa nisy zavatra teo anelanelanao ary fantatrao fa tsy afaka mitohy izany dia manapoka koa izany.
Raha nifandray akaiky tamin'izy ireo ianao dia halaim-panahy hanao izany indray.
Raha mety manandrana mametaka ny tenanao ianao fa ampy ho anao ny maha-akaiky anao ara-batana, izany faniriana izany dia avy amin'ny fanirianao zavatra bebe kokoa.
Arakaraky ny maha-akaiky anao ara-batana anao no vao hikapohanao ny tadin'ny homamiadana izay manaloka ny fitsaranao ary manakana anao tsy handroso.
8. Mialà sasatra
Raha voatery mandany fotoana be dia be manodidina ny olon-tianao ianao dia tsy ho afa-mandositra azy ireo maharitra…
… Fa afaka mahita toerana kely miserana ianao.
Mialà amin'ny tanàna. Maka dia iray andro. Maka dia amin'ny faran'ny herinandro. Makà fialantsasatra roa herinandro.
Ento ny tenanao any amin'ny toerana tsy misy azy ireo, tsara kokoa miaraka amin'ny namanao akaiky indrindra any aoriana, ary manaova fotoana mahafinaritra.
Ny halaviran'ny vatana dia mety hamelombelona ny saina ary hanampy anao hanana fomba fijery kely momba ilay toe-javatra.
9. Mijanona ho be atao foana
Ny zavatra tsy ilainao izao dia fotoana be dia be hipetrahana sy hanonofinofy.
Mila mazoto miasa foana ianao ary mitazona ny sainao ho variana.
Manaova drafitra miaraka amin'ny namanao amin'ny hariva. Fenoy ireo faran'ny herinandro ireo. Midira kilasy fanatanjahan-tena vaovao.
Manaova bebe kokoa amin'ireo zavatra efa tianao na manandrama zava-baovao.
10. Mandrosoa amin'ny fiainanao
Misy drafitra efa nataonao momba ny mpandoro lamosina ve?
Manana nofy lehibe ve ianao fa natahotra kely hanenjika?
Moa ve ianao, tamin'ny fahatsiarovan-tena na tsy fahatsiarovan-tena, nitazona ny tenanao ary nisoroka ny fiovana, mba hahafahanao mandany fotoana miaraka amin'ilay zavatra tianao indrindra?
Eny, izao no fotoana hampiverina anao ny fifantohanao.
Inona no tena tadiavinao amin'ny fiainana?
Efa nanonofy fanovana asa ve ianao?
Misy ve ny tabataban'ny sisin-dàlana efa nosaintsaininao?
Fotoana izao handraisana ny omby amin'ny tandrony. Fotoana izao handraisana ireo dingana mandroso izay napetranao hatrizay.
Hamarino tsara fa ianao no mitana andraikitra amin'ny sarimihetsika amin'ny fiainanao, ary ataovy izay hitranga.
Hiova ny laharam-pahamehanao toy ny fiainanao, ary ho hitanao tsy ho ela fa tsy dia mitovy ny fahatsapanao ny momba ilay olon-tianao.
11. Miala amin'ny tsy fisakaizana
Ity dia mety toa tsy dia misy dikany firy, fa ny mahita ny sarin'izy ireo mipoitra eo amin'ny sakafonao dia mety hanimba ny andronao.
Izy io dia mety hamela anao hipetraka amin'ny olona miaraka aminy na amin'izay ataony. Mety hiafara amin'ny hidina lavaky ny bitro ianao ary handany ora maro amin'ny fametahana azy ireo ao amin'ny Instagram.
Sarotra ny manindry ilay bokotra 'esory', fa vitanao izany.
Manala ny tenanao hiala amin'ny lalan'ny fakam-panahy ianao, ary mamonjy ny tenanao amin'ireo tsy ampoizina hita maso tsy mahafinaritra.
Ny ho avy dia hisaotra anao. Mety tsy ho tsikaritr'izy ireo akory fa nanaraka azy ireo ianao.
Moa ve ianao manao tantara Instagram be dia be ary mahita fa manamarina foana ianao raha nahita azy ireo?
Moa ve ianao mandefa amin'ny fanantenana fa ho hitan'izy ireo izany ary ho tsapany ny fotoana mahafinaritra anao tsy misy azy ireo?
Raha izany dia azonao atao ny manakana azy ireo tsy hahita ny tantaranao sy ny hafatrao. Amin'izay ianao dia handefa ho anao fa tsy miaraka amina antony manosika.
12. Eritrereto ny antony fototra
Ity ve no fotoana voalohany nahitanao ny tenanao nifandray tamina olona tsy tratrarina?
Raha tsy izany dia mety ho tonga ny fotoana hisaintsainana lava sy mafy momba ny antony mampivelatra ireo fahatsapana ireo.
Tianao foana ve izay tsy azonao? Mampientam-po ve ny manenjika? Matahotra fanoloran-tena ve ianao?
Mety misy antony maro samy hafa ao ambadik'io, fa raha lamina miverimberina io dia raiso ho toy ny fotoana ahafahana mandalina lalindalina kokoa izany ary hahazo fahatakarana tsara kokoa ny antony anaovanao ireo zavatra ataonao.
Ary amin'ny manaraka mahatsapa ho tonga fahatapahana ianao, aza avela hivoatra be izany. Raha tsy afaka izany dia ataovy aloha araka izay tratra ireo dingana ireo alohan'ny hitondrana anao.
Raha misy vintana mety hitranga dia manaova fofonaina lalina ary lazao azy ireo ny zavatra tsapanao .
Raha toa ka eny no avalin'izy ireo dia misy zavatra mahafinaritra mety hipoitra. Raha toa ka tsia no avalin'izy ireo, dia namonjy alahelo mafy mahatsiravina ianao.
5 segondra ny fiainana fahavaratra
ny vadiko mametraka ny zanany vavy eo alohako
maninona no misy zava-dratsy mahazo ahy tato ho ato
inona no hevitra ny velona?